Akụkọ - Mgbapụta atụmatụ ihe mberede zuru oke maka ihe ọghọm kemịkal dị ize ndụ
A na -eme mmemme mberede mberede zuru oke na mpaghara ihe egwu dị na ugbo tank. Egwuregwu ahụ sochiri ọgụ ọgụ n'ezie, na -elekwasị anya n'ịmepụta mgbapụta ihe, nsị ndị ọrụ na ọkụ n'ime ugbo tankị dị nso n'oge a na -ebugo ma na -ebutu gwongworo n'ugbo tank. Ogbako ọrụ ọha na eze bidoro nzaghachi mberede. Onye nduzi ogbako ahụ bụ Zhang Libo nyere iwu ka ewepụta ngwa ngwa nke ndị ọrụ nnapụta mberede, otu mgbapụ, otu nlekota gburugburu ebe obibi, otu mmetọ, otu ndị na -ahụ anya, ndị na -efesa ọkụ, na ndị ọrụ nnapụta ahụike ka hazie ọrụ nzaghachi mberede ma mee nke mbụ. Nzọpụta mberede.
N'oge mmega ahụ, otu ọ bụla na -eme n'usoro n'usoro yana ọsọ ọsọ dịka ihe achọrọ, ọrụ na usoro nke mmega nnapụta siri dị. Ndị ndu ahụ jiri nlezianya nye iwu ma ziga ezi uche, ndị niile sonyere na mmemme ahụ kwadosịrị n'ụzọ zuru oke ma gbuo ya n'ọnọdụ, na -emezu ihe ngosi mmịpụta mberede mberede. Omume a ọ bụghị naanị na-eme ka ikike ụlọ ọrụ ahụ nwee ike ịzaghachi ihe mberede na mkpebi mkpebi, iwu, nhazi na nhazi, wusiri mmata ihe egwu na mmata nchedo ọkụ nke ndị ọrụ nchekwa na ndị ọrụ na nzaghachi maka ihe mberede, kamakwa meziwanye ihe mberede na saịtị. ọsọ nzaghachi, ike njikwa na ọkwa ọgụ n'ezie, Tọrọ ntọala siri ike maka ịrụsi ọrụ ike imepụta ihe dị mma yana imepụta ụlọ ọrụ dị nchebe.